IPanguin: Jonga ifuthe kuTshintsho lweAlgorithm kaGoogle | Martech Zone
IPanguin: Jonga ifuthe kuTshintsho lweAlgorithm kaGoogle
Ngamanye amaxesha izixhobo ezilula zezona zibaluleke kakhulu. Ixesha nexesha, abathengi bethu bayazibuza ukuba ingaba azichaphazelekanga okanye azichaphazelekanga lutshintsho lwealgorithm uGoogle aqhubeka nokukhupha. Asikhathazeki malunga nabo njengoko sasinakho ngaphambili-kuko konke ukuthembeka ii-algorithms ziphuculwe Kulungile ukuba sigxile ngakumbi ekubhaleni umxholo ongcono kunye nokuqinisekisa ukuba kulula ukwabelana ngawo.
Ukuba ungathanda ukugcina iithebhu ezikufutshane kwi-algorithm, ayizukulunga ukubeka ngaphezulu uhlaziyo lwangempela lwealgorithm kunye nophando lwakho lokujonga izinto eziphilayo ukuze ubone ukuba akukho galelo na? Yiyo kanye le nto iBarracuda ibonelela ngayo ngesixhobo sayo esibizwa IPanguin. Ngena kwisixhobo, khetha i kubahlalutyi akhawunti ongathanda ukuyihlalutya, kwaye isixhobo sigqale ukugcwala kwendlela yakho yokukhangela kunye nemihla kaGoogle Panda, uPenguin kunye nolunye utshintsho olubalulekileyo lwealgorithm.
Njengoko ubona, sithathe idiphu ekukhululweni komdlalo wePenguin ngokuchanekileyo. Kudala silwa neminye imimandla ebibe umxholo wethu kunye nokuqinisekisa ukuba imimandla yethu iphinda ithumele ngokufanelekileyo. Sifuna ukuqiniseka ukuba asinayo nayiphi na imimandla ngaphandle phaya ngesixa esikhulu somxholo ophindiweyo ovela kuthi.
U-Erin kunye neqela lakhe leengcali ze-SEO kwi Amaqhinga eSiza undijikele kwesi sixhobo ngexesha lethu lomboniso weveki yonke, Umda weRadiyo yeWebhu -Sixhasa umboniso.
tags: AlgorithmIalgorithm kaGoogleUtshintsho lwealgorithm kuGooglegoogle pandaUnombombiya kaGoogleIpandaipenguin
Iindlela zokuthenga eziSelfowuni kwihlabathi liphela